အပျိုရည် လူပျိုရည် ပျက်မှာကို မကြောက် တော့တဲ့ ( 21 ) ရာစု အမှန်တရား .. – popin
June 2, 2019 Knowledge0
လိင်မှု ကိစ္စဟာ ပွင့်လင်း မြင်သာလာပြီး အချစ်စစ် ဆိုတာ ဈေးကြီး လာတယ် ။ အပျိုရည် လူပျိုရည် ပျက်မှာ ကြောက်ဖို့ ထက် ဖုန်းပျောက် မှာကို ပိုပြီး ကြောက်တတ် လာကြတယ် …. ။ ခေတ်မှီတယ် ဆိုတာ သောက်တတ် စားတတ် မှ ဆော်တွေ ဘဲတွေနဲ့ ပတ်ရှုပ် တတ်မှ လူရာဝင်တယ်လို့ ယူဆ ကြတယ် ။
ရေချိုးခန်း အိမ်သာဟာ ဓါတ်ပုံ ရိုက်ရတဲ့ စတူဒီယို တစ်ခု ဖြစ်လာတယ် …. ။ ဘုရားကျောင်းကန် ဟာ ချိန်းတွေ့ ဖို့ ဘုဖို့ နေရာကောင်း ဘိကောင်း ဖြစ်လာတယ် ။ အလိမ် အညာ သိမ်ဖျင်းတဲ့ ၁၀၀ ဖိုး သုံးပုဒ် တွေဟာ အမှန်တရား ဖြစ်လာတယ် …. ။ မိန်းကလေး တွေဟာ AIDS ဖြစ်မှာထက် ကိုယ်ဝန် ရမှာကို ပိုကြောက် လာကြတယ် ….. ။
တစ်စုံ တစ်ယောက်က အမှန်တရား ဘက်မှာနေပြီး လူတွေရဲ့ မကောင်းမှု အကျင့်ပျက်ခြစားမှုကို တော်လှန် ပုန်ကန်လာရင် အဲ့ကောင်ဟာ ပတ်ဝန်ကျင်း ရဲ့အဆိပ် ပြည်သူ့ ချဉ်ဖတ်ဖြစ်ပြီး ရွာပြင် ထုတ်ခံရမယ် …. ။
ရုပ်ရည်ထက် အဝတ်အစား ဖက်ရှင် နဲ့ သုံးဖြုန်းနိုင်မှုဟာ လူ့အဆင့်အတန်းဆိုတာဖြစ်လာတယ် ။ ငွေဟာ မိသားစု သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းနဲ့ လူမှုရေးထက် ပိုအရေးကြီးလာတယ် …. ။ လူငယ်တွေဟာ အချစ်ဆိုတာ တစ်ခုတည်းနဲ့ မိဘဆွေမျိုးတွေကို စွန့်ခွာဖို့ ဝန်မလေးကြတော့ဘူး ။
ယောင်္ကျားသားတွေဟာ အိမ်ထောင်ပြု ဖို့ ကြောက်ပြီး လိင်ဆက်ဆံဖို့ပဲ ပိုပြီမက်မောလာကြတယ် …. ။ အချစ်ကိုကစားသူဟာ ပျော်ရွှင်မှုတွေရပြီး အချစ်ကိုခံစားသူဟာ ပိုပြီးနာကျင်ရတယ် ။ အခုခေတ်မှာ အချစ်ဟာ ရေပေါ်ဆီ ။ လူသားမျိုးဆက်ရဲ့ လူသားဆန်မှု အသစ်အသစ်တွေလားတော့ မသိ … အဲ့တာတွေဟာ 21 ရာစုရဲ့အမှန်တရား ….. ။
အပြိုရညျ လူပြိုရညျ ပကျြမှာကို မကွောကျ တော့တဲ့ ( 21 ) ရာစု အမှနျတရား ..
လိငျမှု ကိစ်စဟာ ပှငျ့လငျး မွငျသာလာပွီး အခဈြစဈ ဆိုတာ ဈေးကွီး လာတယျ ။ အပြိုရညျ လူပြိုရညျ ပကျြမှာ ကွောကျဖို့ ထကျ ဖုနျးပြောကျ မှာကို ပိုပွီး ကွောကျတတျ လာကွတယျ …. ။ ခတျေမှီတယျ ဆိုတာ သောကျတတျ စားတတျ မှ ဆျောတှေ ဘဲတှနေဲ့ ပတျရှုပျ တတျမှ လူရာဝငျတယျလို့ ယူဆ ကွတယျ ။
ရခြေိုးခနျး အိမျသာဟာ ဓါတျပုံ ရိုကျရတဲ့ စတူဒီယို တဈခု ဖွဈလာတယျ …. ။ ဘုရားကြောငျးကနျ ဟာ ခြိနျးတှေ့ ဖို့ ဘုဖို့ နရောကောငျး ဘိကောငျး ဖွဈလာတယျ ။ အလိမျ အညာ သိမျဖငျြးတဲ့ ၁၀၀ ဖိုး သုံးပုဒျ တှဟော အမှနျတရား ဖွဈလာတယျ …. ။ မိနျးကလေး တှဟော AIDS ဖွဈမှာထကျ ကိုယျဝနျ ရမှာကို ပိုကွောကျ လာကွတယျ ….. ။
တဈစုံ တဈယောကျက အမှနျတရား ဘကျမှာနပွေီး လူတှရေဲ့ မကောငျးမှု အကငျြ့ပကျြခွစားမှုကို တျောလှနျ ပုနျကနျလာရငျ အဲ့ကောငျဟာ ပတျဝနျကငျြး ရဲ့အဆိပျ ပွညျသူ့ ခဉျြဖတျဖွဈပွီး ရှာပွငျ ထုတျခံရမယျ …. ။
ရုပျရညျထကျ အဝတျအစား ဖကျရှငျ နဲ့ သုံးဖွုနျးနိုငျမှုဟာ လူ့အဆငျ့အတနျးဆိုတာဖွဈလာတယျ ။ ငှဟော မိသားစု သူငယျခငျြးအပေါငျးအသငျးနဲ့ လူမှုရေးထကျ ပိုအရေးကွီးလာတယျ …. ။ လူငယျတှဟော အခဈြဆိုတာ တဈခုတညျးနဲ့ မိဘဆှမြေိုးတှကေို စှနျ့ခှာဖို့ ဝနျမလေးကွတော့ဘူး ။
ယောင်ျကြားသားတှဟော အိမျထောငျပွု ဖို့ ကွောကျပွီး လိငျဆကျဆံဖို့ပဲ ပိုပွီမကျမောလာကွတယျ …. ။ အခဈြကိုကစားသူဟာ ပြျောရှငျမှုတှရေပွီး အခဈြကိုခံစားသူဟာ ပိုပွီးနာကငျြရတယျ ။ အခုခတျေမှာ အခဈြဟာ ရပေျေါဆီ ။ လူသားမြိုးဆကျရဲ့ လူသားဆနျမှု အသဈအသဈတှလေားတော့ မသိ … အဲ့တာတှဟော 21 ရာစုရဲ့အမှနျတရား ….. ။
” မြန်မာပြည်ကထွက်သော ထန်းသီး။ အသည်းရောင် အသားဝါရောဂါကို လက်တွေ့ပျောက်ကင်းစေနိုင်အောင် ထန်းသီးက ကုသပေးနိုင်ပါတယ်နော် “Next
တနိုင်ငံလုံးမျှော်နေသော_ရွှေမိုးးးးးလာပါပြီ ရက်ဆက်ရွာသွန်းမှာမို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြပါဗျို့ ၁၉ ၅ ၂၀၁၉ရက်​ မနက် နိုင်ငံအောက်ပိုင်းကို စတင် ၀င်ရောက်လာတဲ့ မိုးဟာ ၂၀ ရက်နေ့မှာ…